Gudoomiyihii Somali Sport& Cultre in Norway oo si wayn loogu soo dhaweeyay Magaalada Dooxa ee Dalka Qadar.
Gudoomiyaha Sportiga Somalida Norway Mr Mahad Turbashaash oo ka qayb galaya shirka dhalinyarada iyo Sportiga dunida ayaan waxaan nasiib u yeelanay in aan ku soo booqano hotelkii u daganaa.
Marka hore waxaan waydiinay gudoomiyaha sababta uu u yimid Dooxa \_ Qadar,. Waxana uu noo sheegay in ay casuumad u soo direen Dalka qadar si uu u masalo dhamaan dhalinyarada Somaliyeed ee ku nool dalalka EUROPE iyo waliba kuwa Africanka ah ee iyaguna dagan dalalka Europe.
Waxa kaloo uu gudoomiyuhu noo sheegay in uu rabo in uu isku xiro CyaartooydaSomalida ee ku nool Europe iyo cayaartooyda Carabta.
Waxa kaloo uu noo sheegay in ay casuumadana la xiriirto ti uu sanadkii hore ku tagay Paris uuna xiriir wanaagsan la soo sameeyay gudoomiyaha Sportiga Qadar oo uu markaa kula kumay Paris.
Waxa kaloo uu Mahad Turbashaash Noo sheegay in ay dhalinyarada Somaliyeed ee ku nool Europe anan noqon kuwo kubada cagta oo kaliya ciyaara ee ay isu qaybiyaan dhamaan cayaaraha, sida kubada Miiska, orodada,dabaasha, Tenniska dheer i.w.m.
Waxa kale oo uu gudoomiyuhu halkan u joogaa ka qaybgal shirka Table\_Tennis. Iyo aqoon is waydaarsiyo kale.
Waxaa bari casuumad u fidiyay jaliyada Somaliyeed ee ku nool Dalka Qadar.
Waxa kaloo Mahad noo sheegay in uu Arbacada la kulmi doono kooxda kubada cagta ugu wayn ee ka dhisan dalka Qadar isaga oo kala hadli doona in ay is waydaarsadaan cayaartooy gaar ahaan kuwa Europe ku nool oo runtii laga helayo cayaartooy ku soo iita gaar ahaan dalka Norway iyo UK.
Waxa uu Mahad aad u amaanay dadaalka ay dhalinyarada Somali Sport & Culture ee dalka Norway ugu jiraan wax u qabadka dhalinyarada Somaliyeed.
Waxana uu ku faraxsan yahay in a hada u ka xeeyeen koox dhalinyaro ah magaalada Stoklom ee dalka Swden, waxaana wafdigaa hogaaminayay Mr Abdulgadir Ibrahim Caddaay yo Hassan Muse oo runtii dadaal aan la soo koobi Karin u gala dhalinyarada siku xirooda iyo u dhaqan celintoodaba.
Caddaay iyo Hassan Muse runtii la aantood marnaba ma suurto gasheen in aan isku dubo ridno cayaaro haday anan iygu ku mashquulsanayn.
Waxa kale oo isaguna mahad leh Abdi Jama Farah oo ah ninkii igu dhiri galiyay in aan ogolaado imaatinka Dooxa Qadar.
Waxa uu hadalkiisii ku soo gaba gabeeyay in ay dhowaan jecelyihiin isku xirka dhalinyarada Europe iyo kuwa Somaiya dagan
Iyaga oo jecel in ay koox u kaxeeyaan dhowaan Somaliya waa hadii uu dhaqaaluhu saamaxo ayuu hadalkiisii ku soo xiray
Mahad waxaa lagala xiriiri karaa: turbashaash@hotmail.com